DRC: စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ကင်ရှာဆာကဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 14 - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ကင်ရှာဆာကဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 14 - အာဖရိက
- အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ကုသမှု, စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနအပိုင်စီးနှင့်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကင်ရှာဆာ၌ဤနံနက်ထုတ်ဝေစာတမ်းများတစ်ခုမှာဖွဲ့သောဘာသာရပ်များဖြစ်ကြသည်။
"အရေးပေါ်ဖဲ Tshisekedi အစီအစဉ်: တစ်ကြွေးမြီန်းကျင်နက်နဲသောအရာ 100 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ", ခေါင်းစဉ်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ22019 အပေါ်ကြီးမြတ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားနှင့်အတူဖြန့်ချိ, ဖလှယ်၏စတုရန်းအတွက်ပြည်နယ်အစီအစဉ်၏ဦးခေါငျး၏အရေးပေါ်, ဖဲ Tshisekedi သမ္မတနိုင်ငံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ဆက်လက်အဆိုပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကပြောပါတယ်။ "ကနဦး USD 488.145.306 တစ်ဘတ်ဂျက်အဘို့စီစဉ်ထားသည်ဤအစီအစဉ်ကိုသေအချာ 600 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာမှယူဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဗျာဒိတ်တော်များကိုပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း၏သံအမတ် "ထိပ်တန်းကွန်ဂို FM ရေပေါ်တွင်ကိစ္စကိုမျက်နှာ-to-မျက်နှာထုတ်လွှင့်ဖို့တနင်္ဂနွေကိုဖိတ်ကြားထားပါသည်သတင်းစာအကြောင်းကြား။ ဤအစီအစဉ်၏ငွေကြေးအများအပြားမေးခွန်းထုတ်သည်သတင်းစာကဆိုပါတယ်။
"400 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 100 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ကွန်ဂိုပြည်နယ်မြှုတ်တဲ့ကြွေးမြီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ဘဏ္ဍာရေးကနေလာမယ့်ပါ။ ပေးသောသူကားအဘယ်သူနည်း အဘယ်အရာကိုအခြေအနေများအောက်တွင်ကြောင့်မြှုတ်ခံခဲ့ရခဲ့တာလဲ နက်နဲသောအရာ! "ဟုအဆိုပါသတင်းစာ Exclaims ။ သတင်းစာအလေးအနက်ဆိုသည်တာဝန်ခံ၏နာမ၌, သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရုံးကဒီပဟေဠိရှင်းလင်းဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှတ်ပုံတင်များတွင်နာဂတျသညျမိမိမှတစ်ဦးကခေါင်းစဉ်: "အစိုးရ၏သင်တန်း: Kabila လူတိုင်းသဘောတူတတ်၏"။ "အလားအလာဝန်ကြီးများ '' ၏စာရင်းကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ၎င်း၏ပေးပို့မတိုင်မီဝန်ကြီးချုပ်မြောကျမတို့ခြင်းကိုသည်းခံနေစဉ်, ဖဲ Tshisekedi, ချိန်းအဘို့, စက္ကူ, အ FCC သည်၏ကိုယ်ကျင့်တရားအခွင့်အာဏာရေးသားခဲ့သည်, အထက်လွှတ်တော်အမတ်ယောသပ်သည် Kabila သည်မိမိအတွက်မနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး GLM နေအိမ်သို့သည် FCC သည်မူဝါဒအပေါင်းစပ်နှင့်အလားအလာရှိသောဝန်ကြီးများအကြီးအကဲများနာဂရေးသားခဲ့သည်။ "ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းပြည်နယ်၏ယခင်ခေါင်းကိုကွန်ဂိုများအတွက်အဖြစ်များသည့်တပ်အဖွဲ့ဝင်များအကြားဓမ္မရေးသားချက်များ၏ဖြန့်ဖြူးရာမှပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးကွဲပြားခြားနားမှုညှိပြီးကြသင့်ပါတယ်" ဟုအနာဂတျထငျသညျ။
သို့တိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးများ၏ပြဿနာ, သူ့ tri-အပတ်စဉ်တစ်ဦးမှခေါင်းစဉ်အပေါ်: "PALU-တစ်ဦးကအဆိုပါကွဲအစွန်းအုပ်စုခွဲ: Lugi Lokondo နှင့် Mutiri ကဲ့ရဲ့ရပ်ဆိုင်း"။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ regrouping ၏ဥက္ကဋ္ဌဦးပါတီနှင့်မဟာမိတ်များ (PALU-A) ကိုပေါင်းစည်း, Gizenga Lugi အသီးသီးလွှတ်တော်အမတ်များ Elvis Mutiri နှင့် Henri သောမတ်စ် Lokondo 1er 2èmeနှင့်မူဝါဒဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းငံ့ lumumbiste, အ tri-အပတ်စဉ်မိန့်တော်မူ၏။ "တယ်လီဖုန်းဖြင့်ရောက်ရှိသည် Henri သောမတ်စ် Lokondo အမတ်ပဲရယ်မောစတင်ခဲ့သည်။ '' ငါပြီးသားမစ္စတာသတင်းစာဆရာအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မနက်ဖြန်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ FCC သည် '' နှင့်အတူတင်သွင်းထားသောစာရင်းများရှုတ်ချအားလုံးကြောင့်ထိုသို့ပြောပါတယ် " 'ရွေးကောက်ခံ Mbandaka တောင်မှဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ထိခိုက်မရဟုအလေးပေး' ' Africanews ကော်လံ။
အခြားကိစ္စများတွင်ကွန်ဂို NEW သတိပေးချက်: "စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနအတွက်မြွေပူရာကင်း: ဝန်ကြီး Jean-Pierre Zekpele" မျို "က၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကို၏ဆုကြေးငွေ"။ စီမံကိန်းများအတွက်ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ် Jean-Pierre ၏ Zekpele ရာ၌ခန့်ထားပြီဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို (BCR) ၏ပရီမီယံလေးပုံသုံးပုံပျောက်ကွယ်သွား NEW ကွန်ဂိုကြေငြာလိုက်သည်။ "ဒီဝန်ကြီး volatilized ကြလိမ့်မည်ဟုသောပရီမီယံတရာအရာရှိများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါနှိုးဆော်သံအစုစုနှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များကမနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကသြဂုတ်လ 13 2019 ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ "ဟုအဆိုပါသတင်းစာကရေးသားသည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်သူ၏ hobbyhorse ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဖေလဇ်မင်း Tshisekedi မှလောဘနှင့်ဝန်ကြီးအံ့အားသင့်ကြသည်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆန့်ကျင်တုန့်ပြန်၌မိမိမှတစ်ဦးကသက်ပြင်းချ AS, FORUM DES ဟာ: "အီဘိုလာရောဂါထက်ပိုတစျထောငျသေလွန်သောသူတို့သည်ပြီးနောက်: နောက်ဆုံးတော့ထိရောက်သောကုသမှု"။ မနေ့ကဒေါက်တာ Jean-Jacques Muyembe ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု, ဂိုမာဆေးရုံဖို့ MAB နှင့် 114-REGN EB3 ခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနှစ်ခုလူနာဆောင် ခဲ့. , သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကွန်ဂိုနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကမှမိမိတို့အိမ်နီးချင်းများအတွက် "အလွန်ကောင်းသောသတင်း။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကြောက်စရာသေစေနိုင်သောရောဂါအီဘိုလာရောဂါယခုဓာတ်မတည့အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေအထောက်အပံ့နှင့်ကူးစက်ရောဂါ (NIAAD) အမျိုးသားရေး Institutes နှင့်အတူဇီဝဆေးပညာသုတေသန (INRB) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကတီထွင်တဲ့မူးယစ်ဆေးကိုကျေးဇူးတင်ရှုံးနိမ့်နေသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနျြးမာရေး။ "ဒါဟာကဆိုသည်။
ထိုမှတပါး, သတင်းအေဂျင်စီ CONGOLAISE (ACP), ဒစ်ဂျစ်တယ်တာဝန်ခံသောအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပေါ်စာစောင်အစီရင်ခံ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖဲ Tshisekedi မှတနင်္လာနေ့တင်ပြ Dominique Migisha, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမျိုးသားစီမံကိန်းမူကြမ်းသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ၏ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု agencier အားဖြင့်ယူကပြောပါတယ်။
DRC: ကြာသပတေးနေ့သြဂုတ်လ 15 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက